मिलको फित्तामा बेरिएर मृत्यु
नेपाल समाचारपत्र, खोटाङ । मझुवागढी नगरपालिका–१२ बस्ने ४६ बर्षीया बिना कुमारी श्रेष्ठको विहीबार मिलको फित्तामा बेरिएर मृत्यु भएको छ । सोही ठाउँ बस्ने गणेश राईले आप्mनै मिलमा मकै पिसिरहेको अवस्थामा
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ । काठमाडौँमा ट्रकको ठक्करबाट पाँचथर याङनाम घर भएका ४० बर्षीय तादेङहाङ जजेलुको ज्यान गएको छ । महानगरपालिका–१४ बल्खु चोकमा शुक्रबार लु.१ ख ९९०९ नम्वरको ट्रकले बा.८२ प
नेपाल समाचारपत्र, बर्दीया । बर्दियामा प्रहरीले ट्याक्टरमा लोड गरीराखेको साल काठ सहित संगम थारुलाई पक्राउ गरेको छ । मगरागडी–७ जब्दी बस्ने भे.१ त ६८२६ नम्बरको टयाक्टरका चालक १८ बर्षीय संगम
बाघको छाला र भालुको पित्त सहित पक्राउ
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार कैलाली जिल्ला धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बोराडाडीबाट संरक्षित बन्यजन्तु बाघको छाला १ थान सहित डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिका–४ बस्ने
म्यादीमा भुकम्प पीडितको भीड ।
चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा । दोलखा जिल्लामा म्यादी प्रहरीको लागि १६ सय ७२ जनाले आवेदन दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । आवेदन दिने अधिकांश भुकम्प पीडित रहेका छन् ।
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । भुकम्प पीडितहरुको घर निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने तथा सवारी चालक अनुमति पत्र बनाईदिने भन्दै ठगी गर्ने एक ब्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान पुरा
नेपालकै नमुना सडक निर्माण कार्यमा समस्या
यमलाल भुसाल, बुटवल । निर्माणाधिन बुटवल वेलवास– वेथरी सडक परियोजनामा पर्ने भौतिक पूर्वाधार ,रुखहरु र विजुलीका पोल समयमै व्यवस्थापन नहुंदा निर्माण कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपालकै नमुना सडकको
सेनाले थाल्यो, होल्ड खन्ने काम
सन्तोष अधिकारी, गोरखा । नेपाली सेनाले गोरखाको बेनीघाट–आरुघाट हुँदै तिब्बतको सिमाना लार्केभञ्ज्याङ सम्म जोड्ने सडकको काम धमाधम सुरु गरेको छ । सेनाको ६५ जना निर्माण दलका सदस्यहरु र होल्ड खन्ने
शान्ति सुरक्षाको पाटोबाट असहज र नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैन, निर्वाचन हुन्छ, गर्छौं– आयोग
काठमाडौँ, १८ चैत । निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा तोकिएको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा अब कुनै शङ्का नगर्न सबैमा आह्वान गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते
काठमाडौं महानगरपालिकामा कांग्रेस–एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने
रामकृष्ण चापागाईं काठमाडौं स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोटको चर्चा चलिरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ। केन्द्रीय सरकार रहने काठमाडौंमा महानगरपालिकाको प्रमुख हुन मुख्य दलका प्रभावशाली व्यक्तिको दौडधुप चलिरहेको छ।
कुमार श्रेष्ठ, बाँके बाँकेमा एम्बुलेन्सले तस्करीका सामान ओसार्ने गरेको पाइएको छ। बुधबार राति नेपालगन्ज नाकामा ठूलो मात्रामा अवैध कपडा ल्याइरहँदा एउटा एम्बुलेन्स सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको फन्दामा परेको हो। भारतबाट
बन्दुक पड्कँदा सुनारको मृत्यु
सन्तोष अधिकारी, गोरखा । जिल्लाको हिमाली गाविस उहियाको एक आरनमा बन्दुकको नाल पड्कँदा दिलबादुर सुनारको मृत्यु भएको छ । स्थानीय चिन्त गुरुङ्गले गत भदौमा जंगलमा भेडा चराउन जाँदा भेट्टाएर ल्याएको
नेपाल समाचारपत्र, राजविराज । संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले विहिवार सप्तरी सदरमुकाम राजविराज स्थित जिल्ला समन्वय समिति र राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । सरकारद्वारा घोषित निर्वाचन र स्थानीय
‘ऐन निर्माण कार्य चाँडो अघि बढाउ’
काठमाडौँ, १७ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले भूमि सुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन तथा नीति चाँडो अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिका सदस्यले तयार हुँदै गरेको नियम
वन समिति माथि छानविन
नेपाल समाचारपत्र, भद्रपुर । जिल्ला वन कार्यालय झापाले चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति माथि छानविन गर्ने भएको छ । समितिका केही पदाधिकारीले गोलिया दाउरा भन्दै काठ बिक्री गरेको घटना प्रकरण
गोरखा सौरपानीमा सबै दलका कार्यक्रम प्रतिबन्ध
सन्तोष अधिकारी, गोरखा । गाउँपालिकाको केन्द्र जनतालाई पाएक पर्ने ठाउँमा नभएको भन्दै सौरपानीबासीले सौरपानीमा सबै दलको कार्यक्रमलाई निषेध गरेका छन् । शुलिकोट गाउँपालिकाको केन्द्र राजनितीक दलहरुले भुगोलको अध्ययन नै नगरी
ठगी मुद्दाका फरार पक्राउ
सहाकरीको रकम ठगि गरी भागेका नुवाकोट थप्रेक गा.बि.स. वडा नं. ९ का रामचन्द्र पण्डीत ताहाचल, काठमाडौं बाट पक्राउ परेका छन । काठमान्डौं महानगरपालिका ३४ स्थित पिपुल्स हेल्पफुल बचत तथा ऋण
सांसद दुलारीको निधनप्रति सदनमा शोक प्रस्ताव
काठमाडौँ, १७ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले सांसद दुलारी देवीको असामयिक निधनप्रति सर्वसम्मतिले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाही जिल्लाबाट समानुपातिक सदस्यमा
उपराष्ट्रपतिबाट पुष्पमेलाको उद्घाटन
काठमाडौँ, १७ चैत । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले खेरगइरहेको सार्वजनिक जग्गाको उपयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । उपराष्ट्रपति पुनले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आजदेखि सुरु भएको ‘तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पुष्पमेला प्रदर्शनी’ को उद्घाटन
खुल्ला ठाउँमा दिसा गरेको आरोपमा १७ पक्राउ
महेन्द्रनगर (धनुषा), १७ चैत । खुल्ला दिसामुक्त अभियान चलिरहेको बेला १७ जना बाटो हगुवालाई धनुषा प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ । तिनीहरु खुल्ला ठाउँमा शौच गरिरहेका थिए । वड़ा प्रहरी